Ikhaya elithokomele eduze nebhishi - I-Airbnb
Ikhaya elithokomele eduze nebhishi
Izivakashi zami zizoba namagumbi okulala angu-2. Omunye unombhede we-pullout trundle kanye nesikhala sekhabethe. Enye ine-futon ongayisebenzisa njengesofa noma umbhede. Ungasebenzisa leli gumbi njengegumbi lokuhlala njengoba line-TV entsha sha. I-Wi-Fi engenantambo kulo lonke ikhaya. Igumbi lokugezela eligcwele langasese kanye namalungelo ekhishi. Igceke elingemuva linevulandi elihle ukuze umuntu ajabulele ikhofi lakhe. Lapho ungena uzobingelelwa uMiller, umdlwane wami onobungane.
Ikhishi liyatholakala ukuze kuphekwe kalula (i-microwave ne-stove top kuphela). Isiqandisi sizoba nendawo yokubeka ezinye izinto ozithengayo.
Ivulandi iyatholakala 24/7 ukuze uthole ikhofi lakho lasekuseni, ibhulakufesi kanye nesidlo sasemini.
4.86 · 224 okushiwo abanye
Le ndawo iwumlando waseHollywood. Izindlu zakhiwa ngeminyaka yawo-1930 futhi zinenhlese emangalisayo enamapulangwe asekuqaleni. Izivakashi zami zithanda ukuhamba endaweni njengoba ibhulokhi ngayinye ihluke kakhulu. Iseduze namabhishi kanye nedolobha laseHollywood ukuze uthenge nezindawo zokudlela. I-Aventura Mall ingenye yezitolo ezinkulu ezinhle nemizuzu nje ukude.
Ngifuna izivakashi zizizwe zisekhaya futhi ngicela ungazise uma zidinga okuthile noma usizo. Ngiyazazi nezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili.